China Boston tavoahangy fitaratra Factory, Boston tavoahangy tavoahangy Supplier
Sinoa mpamatsy 30ml manga boribory fitaratra mitete tavoahangy Boston ho an'ny menaka tena ilaina
【Fitaovana avo lenta】Ireo tavoahangy fitaratra boston na tavoahangy tena ilaina dia vita amin'ny vera tsara tarehy matanjaka, sarony plastika mainty matevina ary tampony silicone mahatohitra harafesina.
【Fampiasana maro】Tsara ho an'ny menaka tena ilaina DIY, colognes, tincture, kosmetika, menaka manitra, menaka volombava, menaka volo na ranon-javatra hafa.Ny eye droppers dia mamela ny habetsahan'ny vokatra tonga lafatra ampiasaina isaky ny mandeha.
【Tavoahangy fitsangatsanganana mety tsara】 Ny habe mety dia mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny dia an-kitapo toy ny fonon'ny Leak-Proof.
【UV RESISTANT】 Ny tavoahangy fitaratra dia vita amin'ny vera amber mahatohitra harafesina.Ny tavoahangyy dia tsy misy BPA ary tsy misy firaka miaraka amin'ny vera amber mahatohitra UV mba hahazoana antoka fa ny menaka ilaina sy ny menaka manitra dia ho voaro tsara amin'ny taratra UV manimba sy ny mety hisian'ny etona haingana.
【LEAKINGPROOF DESIGN】 Ny vavan'ny tavoahangy vita amin'ny visy dia mifanandrify amin'ny satroka firaka aluminium mipetaka volamena tsara tarehy, izay mifanentana tsara ary afaka misoroka ny fivoahan'ny rano.
500ml Glass Blue Boston Round tavoahangy misy Black Fine-Mist Sprayer
100ml 300ml Amber Boston Container Boston Round Bottle miaraka amin'ny Black Ribbed Cap
tavoahangy vera labiera, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, tavoahangy ranom-boankazo, tavoahangy diffuser volotara, zava-pisotro misy tavoahangy vera, Tavoahangy Saosy Glass Bbq,